ယိုးဒယား ဝက်ပေါင်သားစတူး Pork Stew | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ယိုးဒယား ဝက်ပေါင်သားစတူး Pork Stew
ယိုးဒယား ဝက်ပေါင်သားစတူး Pork Stew
Posted by ဦးကျောက်ခဲ on Sep 2, 2013 in Creative Writing, Drama, Essays.., Food, Drink & Recipes, My Dear Diary, Photography | 49 comments
ဦးကျောက်ခဲရဲ့ “ဒီမောင့် လက်ရာ”
ကျနော်များ မန်းဂဇက်မှာ လူခြေတိတ်နေတာမို့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ပရိုမိုးရှင်းလုပ်ပါ့မယ်…
တတ်သိပညာရှင် ဆရာ၊ဆရာမများက နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေးတွေ ရေးကြ ဆွေးနွေးကြတာမို့၊ ဉာဏ်မမီတဲ့ ဦးကျောက်ခဲက ယနေ့ကြွလာတဲ့ စာဖတ်သူ ပရိတ်သတ်ကို ဧည့်ခံချင်တာကတော့ ယိုးဒယားစတိုင် ဝက်ပေါင်သားစတူး “Khao Kha Moo” ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ ။ အဲ… ဝက်သားမစားရင်တော့ ဆောဒီးလို့ တောင်းပန်ပါရစေ။ ဒီဝက်ပေါင်သားနဲ့ ထမင်းပွဲကို ထိုင်းနိုင်ငံ တလွှားက… ( တိန်… တောင်ပိုင်း ပတ္တနီ၊ ယာလ၊ နရသီဝပ် မပါ ) လမ်းဘေးဈေးဆိုင်တွေမှာ အလွယ်တကူဝယ်ယူ စားသုံးနိုင်တာမို့ လွယ်ကူစားမြိန် ဈေးသက်သာတဲ့ ဟင်းလျာတစ်မျိုးပေါ့ ခင်ဗျာ။ အဲသည့်အထဲမှာမှ ချင်းမိုင်ညဈေးထဲက မြန်မာဆိုင်ဆိုရင် နာမည်ကြီးခင်ဗျ။ ဝက်ပေါင်သားတင်မဟုတ် ဝက်အူပွပါရတယ်ဆိုတော့ စေတနာကောင်းပြီး ရက်ရောတဲ့ အစ်မကြီးဆိုင်မှာ ညနေဆိုရင် လူကြိတ်ကြိတ်တိုးပေါ့ဗျာ။ ကိုလက်စထရောများတယ်၊ အဆီပိတ်တယ် ဆိုပေမည့် အရသာက အတော်ကောင်းတာမို့ ဝက်သားကြိုက်တဲ့ ဦးကျောက်ခဲရဲ့ ဝက်သားစတူးကို မြည်းကြပါဦး…။
ဝက်ပေါင်သား (၁ ကီလိုဂရမ်ခန့်)
သကြား ထမင်းစားဇွန်း ၁ဇွန်း
စားသုံးဆီ ၀.၃ လီတာခန့် (ပဲဆီဆိုရင် ပိုကောင်းပါတယ်)
ရေဆေး သန့်စင်ထားတဲ့ နံနံပင် အမြစ် ၆ခု
ကြက်သွန်ဖြူ အမွှာကြီး ၅ခု
Peppercorn ၁၅ခု (မြန်မာလို ဘယ်လိုခေါ်တယ် မသိ)
သစ်ကြံပိုးခေါက် ၁လက်မခန့် ၂ခု
ပဲငံပြာရည် အပျစ် အချိုဇွန်း ၁ဇွန်း
ပဲငံပြာရည် အကျဲ ထမင်းစားဇွန်း ၃ဇွန်း
ပဲငံပြာရည် အချို ထမင်းစားဇွန်း ၁ဇွန်း
ဆား အချိုဇွန်း ၁ဇွန်း
တရုတ်မဆလာ အချိုဇွန်း ၁ဇွန်း
ကြံသကာ ၁လက်မ ပတ်လည် ၁တုံး (ချေထားပါ) (ထန်းလျက် ကောင်းကောင်းဆိုရင်လည်း ဖြစ်ပါသည်)
အခွံခွာထားတဲ့ ကြက်ဥပြုတ် စားချင်သလောက်ထည့်
ဝက်ပေါင်သားကို အမွေးအမျှင် ပြောင်အောင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်၊ ရေစင်အောင်ဆေးပြီး ရေစစ်ထားပါ။ ရေခြောက်သွားရင် သကြား ထမင်းစားဇွန်း ၁ဇွန်း၊ ဆား အနည်းငယ် နဲ့ ဝက်ပေါင်ကို နှံ့နေအောင်နယ်၊ ပလတ်စတစ်အိပ်နဲ့ ပတ်ပြီး ရေခဲသတ္တာအောက်အဆင့်မှာ ၂နာရီခန့် နှပ်ထားပါ။ ပြီးရင် ဒယ်အိုးတစ်လုံးကို အပူတိုက်ပြီး သကြား အချိုဇွန်း ၁ဇွန်းခန့်ကိုဖြူးလိုက်ပါ။ သကြားတွေ အရည်ပျော်ပြီး နီညိုရောင်သန်းလာရင် နှပ်ထားတဲ့ ဝက်ပေါင်ကို ထည့်လှိမ့်ပါ။ အိုးမကပ်ပါစေနဲ့။ ဝက်ပေါင်နီညိုရောင် သန်းလာရင် ဆယ်လိုက်ပါ။ နောက်ဒယ်အိုးတစ်လုံးထဲမှာ ဆီထည့်ပြီး ဆီကျက်ရင် ဝက်ပေါင်ကို ဟိုဘက်သည်ဘက်လှည့်ပြီး ကြော်လိုက်ပါ။ အခေါက်တွေ နီရဲပြီးတင်းလာရင် ဆယ်ပြီး ဆီစစ်ထားပါ။
ဆီစစ်နေတဲ့အချိန် ကြက်သွန်ဖြူ၊ နံနံပင်အမြစ်၊ Peppercorn များကို ကြေညက်အောင် ရောထောင်းထားပါ။ ဝက်ပေါင်ကြော်ကို ဆီစုပ်စက္ကူနဲ့ ဆီပြောင်အောင်သုတ်၊ ထမင်းပေါင်းအိုးထဲမှာ အသားတုံးမြုပ်အောင် ရေထည့်ပြီးပြုတ်ပါ။ ရေဆူလျှင် ကြက်ဥပြုတ်၊ ထောင်းထားသော အဆာပလာ၊ အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော ဟင်းခပ်အမွှေးအကြိုင်၊ ပဲငံပြာရည်၊ ကြံသကာတို့ကိုထည့်ပြီး ၂နာရီခန့် ပေါင်းပါလျှင် ( တကယ်က ပြုတ်တာ… ဟီ ဟိ ) အရသာရှိသော ဝက်သားစတူး ရပါပြီခင်ဗျာ။ အဲ… အဖုံးဖွင့်ပြီး ရေခမ်းခါနီးတိုင်း ဟင်းအိုးချတဲ့အထိ ဝက်သားတုံးမြုပ်အောင် ရေထပ်ဖြည့်ဖို့ ၊ အရည် အရသာမြည်းဖို့ မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျ။ အသားနူးရင် ရွရွလေး အသားကို ညှပ်နဲ့ဖဲ့၊ ထမင်းပေါ်ကိုတင် အရည်ရွှဲရွှဲလေးဆမ်း၊ အိုးကြက်ဥလေးကို ထက်ခြမ်းခြမ်းပြီး ဆော့စ် သို့မဟုတ် ချဉ်ဖတ်တစ်မျိုးမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုက်လန်ရွက်ကို ဟင်းရေပူပူထဲ ၂မိနစ်လောက်ထည့်ပြုတ်ပြီး ၁လက်မစီလောက် လှီးထားတာနဲ့ ဆွဲကြည့်ပါ။ လျှာကပါးစပ် လူဖြစ်ကျိုးနပ်ရပါစေမယ်လို့…။
ကျောက်စ်လည်း အလွန်ကြိုက်တာမို့ ယိုးဒယားမှာနေတုန်းက…
လမ်းကြုံတိုင်း ၂ပွဲလောက်တော့ ကြိတ်လိုက်တာပဲ…
အခုတော့ ဒီမှာဆိုင်မရှိလို့ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ချက်စားပလိုက်တယ်…
ပစ္စည်းစုံသာ ဝယ်ပေး…စားချင်ရင် ချက်ကျွေးမယ် ကိုချို…
အနော်လည်း ဒီ တစ်ပတ် ဘယ်လို လူစည်အောင် ပရိုမုတ်ရမတုန်း စဉ်းစားရတာ။
နောက် လာမယ် ကြာမယ်၊.
ဒီ ဝက် စ တူးက ကန်စွန်းရွက် ထည့်လို့ ရသလားးးး
တရုတ်နည်းက အရည်စပ်စပ်ဆို ကန်စွန်းရွက် ခပ်လို့။
အမှန်တော့ ဆာလာပြီး စားချင်လာလို့။
တစ်ခါမှ မစားဘူးဘူးးးးးး ယိုးဒယားနည်းကို။
ယိုးဒယားဝက်စတူးက ကန်စွန်းရွက်မထည့်ဘူး မိဇာဂျီးရဲ့…
နာနတ်ပွင့် နဲ့ Five Spice က မပါမဖြစ်၊ မထည့်ရင် ဝက်စော်နံလိမ့်မယ်…
ချက်ရတာလွယ်ပါတယ်၊ ချက်စားကြည့် ရှယ်ပဲ…
စားဒေါ့စားချင်သား… ထည့်စရာ အမယ်များလို့ အစားဒေါ့ဗူး… ခရစ်စတယ်လေး လုပ်ကျွေးမှ စားရဒေါ့မှာဗဲ.. ခရစ်ရေ ကိုကိုကြောင်ကြီးအတွက် ဝက်စတူး တပွဲဟေ့… ပြီးဒေါ့မှ လှယျာဂျီးနဲ့ လှယျာဂျီးနဲ့….
အနံ့အရသာကောင်းချင်ရင် ဒီလောက်တော့ ထည့်ရမှာပေါ့ ကိုရင်ကြောင်…
ခရစ်စတယ်လေးက ဝက်စတူးကို ပဒိုင်းသီးနဲ့ ရှယ်ချက်ပေးမယ်တဲ့…
ကျောက်နဲ့ ၀ါး… ၀က်စတူးကို အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ သွားရောင်းမယ်…
ဝက်စတူးကနေ ဝါးစတုံး ဘဝ ရောက်သွားချင်လို့လား
ဟီ ဟိ မကြံကောင်းမစီရာ၊ ဟာလာအလုပ်ခံရအောင်လို့…
သာမီးဝေါင်းပဲရောင်း၊ ကျောက်စ်က ချက်ရုံတင်… အား ဟိ
အမလေး..”၀က်”အကြောင်းကြားရင် တုန်တုန် လာတယ်………………
ကျောက်စ်ကတော့ ဝက်ဆိုရင် နှာဖျားကနေ အမြီးအထိ တွယ်တာပဲ ကိုရင်ညိုရဲ့…
ဟီ ဟိ ဒီမှာ ဝက်ခေါင်းတို့ ဦးနှောက်တို့က ဈေးပေါတာမို့ မနည်းဝိတ်ချနေရတယ်…
နည်းမျိုးစုံနဲ့ ပရိုမိုးရှင်းလုပ်ပါတယ် ဆိုပြီး
အ ဟီး ဟုတ်ရပါဘူး မအိရယ်…
အဘယ်ပုံ အဘယ်နည်း ချက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး ပရိုမိုးရှင်းမိတာပါ…
ကျောက်စ် ဟင်းချက်ကောင်းတာ သူသိပါတယ် ခင်ဗျ…
၀က်သားရှောင်ရင် ၀ိတ်ပိုကျလွယ်တယ်ပြောလို့ မနက်ဖြန် စရှောင်မလားလို့ …
ဟိုနေ့က ဆရာဂီတင်ထားတဲ့ဟင်းပွဲတွေက တကယ်ကိုပဲဦးကျောက်စ်လက်ရာတွေပေါ့.. ယိုးဒယားအစားအစာတွေတော်တော်များများကြိုက်တယ်… ကွတ်တယို.. ဖာ့ကပေါင်းတို့ ..တုံရမ်းတို့အကြိုက်ဆုံးပေ့ါ.. ချက်ကြည့်ပေမယ့် သူတို့လက်ရာကိုမမှီနိုင်ဘူး.. ဦးကျောက်စ်နည်းရှိရင်တင်ပေးပါအုန်း..
နှင်းမမကို နံပိန်လေးလို့ဆိုပြီး ဆိုက်တူအောင် ကြံဆောင်နေတာလား မသိပါဘူး..
နည်းလေးကူးသွားတယ်.. peppercorn ဆိုတာ ရိုးရိုးငရုတ်ကောင်းစေ့အမဲကိုပြောတာလားမသိ..
ယိုးဒယားမှာ ၅နှစ်လောက်နေဖူးတာမို့ ထိုင်းစာ ကောင်းကောင်းချက်တတ်ပါတယ်…
နောက်ထပ် ဟင်းချက်ပို့စ်တွေ တင်ပါဦးမယ် Crystalline ရယ်…
Peppercorn ဆိုတာ တရုတ်ငရုတ်ကောင်းလို့ ပြောရင် ရမလားမသိ…
အနီရောင်လည်းရှိတယ်၊ အနက်ရောင်လည်းရှိတယ်… ပုံထပ်ဖြည့်လိုက်မယ်
ဦးကြောင် ထမ်းနိုင်ပါတယ်ကွယ်….. ပုခုံးအား ကောင်းမှကောင်း… လျှာဂျီးနဲ့ လျှာဂျီးနဲ့ ခရစ်စတယ်လေး အတွက်ဆို…
အူးလေးကတော့ ကွကိုယ် အေးဆေးမပျင်းဘူးရယ်..။
အီးဇီးကွတ် အဖွဲ့ကို ရန်သွားစနေသကိုးး…
ချက်ကျွေးမယ်ဆို.စားပေးပီး ဒီပို့စ်မှာ ပြန်လာထောက်ခံပေးဘာ့မယ်.. ဗျာ။
တခုပဲ ကုလားမဆလာပါရင်သာ စားမရတာ..
ဟီး ဟီး ဒါက အစပျိုးထားတာ…
ဝက်သား တုတ်ထိုးတို့၊ ထိုင်းစာချက်နည်းတို့ လာဦးမယ် ကိုမတ်ရဲ့…
အချိန်ရရင် ခင်ဗျားတို့ကို ချက်ကျွေးပါ့မယ်ဗျာ…
ပျံလာယင် ချက်ကျွေးဘာ ဥငေးး
နောက်ခါ ချော့မပေးဘဲ နေပလိုက်မှာ … ငီးးငီးး
ဂိုဏ်းဝင်သွားအောင် ခင်ဗျားကို ချက်နည်းသင်ပေးမယ်လေ…
သူမ ကို ဒီပိုစ့်လေး ပြလိုက်မယ်
အက်ဒိ ကွန်မန့် ပျောက်ထွက်သွားလို့ 
ဒီပို့စ်ကို ပြပြီး ချက်ကျွေးခိုင်း… ဟီဟိ
ဦးလေးကတော့ အခါနှောင်းသွားလို့ ချက်ကျွေးရတော့မယ်…
(ဒယ်အိုးတစ်လုံးကို အပူတိုက်ပြီး သကြား အချိုဇွန်း ၁ဇွန်းခန့်ကိုဖြူးလိုက်ပါ) ဆိုရာမှာ….
ဆီမပါပဲ ဒယ်အိုးကို မီးပူပေးပြီး သကြားထည့်လိုက်ရမှာလား။
စာဖတ်ပြီး သွားရည်ကျလာလို့ ချက်စားကြည့်မှာမို့ သေချာအောင် မေးရတာ။
ဒယ်အိုးကို ဆီမထည့်ပဲ အိုးပူလာမှ သကြားဖြူး…
အရောင်တက်လာမှ ဝက်သားထည့်ပြီး လှော်လိုက်တာပါ။
အမှန်က ကြေးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အိုးထဲမှာ မီးမြှင်းမြှင်းနဲ့ ပြုတ်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်…
စားကာနီးရင် အပူပြန်ပေး၊ ဖဲ့ထားတဲ့အသားကို ဓားပြားရိုက် အရည်ဆမ်း…
ကြံမဆိုင်ချဉ်ကို ပါးပါးလှီး၊ ကြက်သွန်ဖြူလေးနဲ့တွဲပြီး စားကြည့်လိုက်ပါ ခင်ဗျာ…
အဲဂလို ဖရီးတော့မရဘူး သဂျား…
စားချင်ရင် ဟင်းချက်တဲ့အချိန် ကူညီရမယ်… အား ဟိ
ကျောက်စ်တယောက်တော့ မီးဖိုခန်းက ထွက်နိုင်အံ့မမြင်
မီးဖိုခန်းက မထွက်ရရင် နေပါစေ ကိုရင်ဂီ…
ဂျစ်ရသူလေး မြိန်မြိန်လျှက်လျှက်စားနေတာ မြင်ရရင်…
ဖရဏပီတိ ဂွမ်းဆီထိသလိုပါပဲလို့… အားဟိ… အပျိုဂျီးများ ဆဲစေသတည်း…
ထွေးညိုဆိုရင်တော့ ကြက်သားကာလသားလေးနဲ့မှ ကိတ်တာ…
၀က်ခေါင်းသားစတူး လုပ်နည်းလေးရှိရင်လဲမစ ပါလားဟင်..ဒို့ဒေရှီ မှာ ၀က်ခေါင်းက ပိုဈေးပေါလို့ပါ….. xo xo xo
ဟမ်မယေး… ပျောက်နေတဲ့ သယ်ရင်း မောဝ်ဝီကြီး ဂလု၊ သရဲလာခြောက်တာလား…
၀က်ခေါင်းသားက စတူးလုပ်ရင် အဆီတွေထွက်ပြီး ချွဲသွားလို့…
အချဉ်ချက်၊ တုတ်ထိုး၊ ပြုတ်ပြီးသုပ် အဲဒါတွေပဲကောင်းတယ်…
လည်ဂုတ်သားကိုတော့ ပျားရည်လေးသုတ်၊ နှမ်းလေးဖြူးပြီး ကင်စားရင်…
ဘီယာ ၁ကဒ်တော့ အသာလေးကုန်သတဲ့ သယ်ရင်းရဲ့… ဟီ ဟိ
ဟို မောင်ကြောင် …
သူများ ပုံ တွေ ကူးပြီး အဝေးက ညော်ပြ မနေနဲ့။
ကိုကျောက် တို့ ကတော့ လက်တွေ့ ကို ပေါင်းပြ နေတာ။
ကိုကျောက် .. နှင်းနှင်း ကို အလေးချိန်တက်အောင် နှိပ်စက်မယ် တော့ မကြံနဲ့နော်။
ကြံသကာတို့ ထန်းလျက်တို့ မရှိရင် ချောကလက်လေးများ ထည့် လို့ ရမရ စမ်းပေးပါ။
အရီးတူမက ဝိတ်တက်ဖို့ နေနေသာသာ ကျောက်စ်ကို အစားသောင်းကျန်းသတဲ့…
စားချင်တာမစားရ ဝိတ်ချနေရတာ စိတ်ပိန်လာလို့ ဟင်းချက်ပို့စ်တင်လိုက်တာပါ…
ကြံသကာတို့ ထန်းလျက်တို့ မရှိရင် သကြားလုံးနဲ့ချက်ကြည့်လေ…
ချောကလက်နဲ့တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်… ဟီ ဟိ
ဦးကျောက်စ်.. ဆီပူထိုးထားတဲ့ ၀က်တုံးကြီးက ချားချင်ချာကြီး..
မွန်ကစ်က ၀က်သားမစားတာတောင် စားချင်အောင် စွဲဆောင်ထားတယ်..
နှင်းကလေးကတော့ ရှယ်ဘဲ.. ခုချိန် မော်ဒယ်လေးလို သွယ်သွယ်လေး ကနေ ဦးကျောက်စ်လက်ရာတွေ စားပီး မြင်ယောင်နေသေးတော့..
မွန်ကစ်က ဗမာလူမျိုးနော်.. ၀က်မစားဘူး ဆိုလို့ တမျိုးမထင်ရဘူး. ဟိ ဟိ..
ဟီ ဟိ ရွာထဲမှာ လူခြောက်နေလို့ ပရိုမိုးရှင်းလုပ်နေတာ မမွန်ကစ်ရဲ့…
အသီးမှာ သရက်၊ အသားမှာ ဝက် ဆိုတော့ ကျောက်စ်ကတော့ ကြိတ်ပါ၏…
နှင်းကလေးက အဆီ အခေါက် မစားရဘူးတဲ့…
စားလက်စ မရှိတဲ့သူကို ကိုကျောက်သွားပြီး မဖျက်စီးလေနဲ့ အဲဒါက စားကောင်းပင်ကောင်းသော်လည်း နောင်ပြင်ရန်ခက်တဲ့ထဲ သူလည်းတစ်ပါးပါစမြဲဗျ။
ဟီး ဟီး ကျန်းမာရေးရှူထောင့်ကကြည့်ရင် မကောင်းပေမည့်…
ယိုးဒယားမှာတော့ ခေါက်ခါမူက နေရာတိုင်းမှာလည်းရှိ လူတိုင်းလည်းကြိတ်…
မိနှင်းကလေး မစားရင် အတင်းမကျွေးပါဘူး… အား ဟိ
ကျုပ်လည်း သိပ်ကြိုက်ပေါ့ဗျာ ဒါပေသည့် အခုတော့ ဆင်ဆင်ချင်ချင် စားဖြစ်နေတယ်လေ။ အသက်အရွယ်က စကားပြောလာပြီမို့လေ။
မိန်းမယူခါနီးလေ ပိုလက်သွေးလေမှတ်တယ် အုကျောက်စ် ညက်ချိနောက်ချက်။ အိမ်လာရင် ဟင်းဒွေဂျိုင့်နဲ့ ဆွဲခဲ့ဘာ။ မုန့်နဲ့နှင်း အဲလေ မုန့်နဲ့ဟင်းလဲချားမွှယ်။
နောင်ဆို သည့်ထက် ရှယ်တွေလာမယ်လေ မသဲရဲ့…
ဂျေမဝင်ကြေး… အား ဟိ
ရုံးပတီသီး နဲ့ အာလူးနေမှာပါဗျာ
ဒီစားသောက်ဖွယ်ရာလုပ်ပုံကို.. ပုံနှိပ်သတင်းစာမှာသုံးဖို့ရွေးထားပါကြောင်း.. ရွာစားဦးကျောက်ခဲရေ့…။
လွမ်းလို့ ရန်ကုန် ပြန်သွားတယ် တဲ့ တဂျီးးးး
သဂျီးရေ ကြိုက်သလိုသာသုံး… ရှော့မရှိဘူး…
အစားအသောက် ပရိုမိုးရှင်းက ဆက်ရေးဦးမှာ…